Ny Vazimba dia anarana niantsoana ireo mponina nonina taty anivon'i Madagasikara (taty Imerina sy Ibetsileo, Ibara, Anjozorobe) talohan'ny nanjakan-dRabiby sy Andriamanelo (taonjato faha-16). Rabiby, mpanjaka arabo, sy Andriamanelo, mpanjaka maley mantsy no navahan'ny lovantsofina fa Arabo sy Maley ary ireo olomainty mpanompony no angaralahy, fa ireo sisa efa nonina taty anivontany tamin'izany dia Vazimba. Ary Rabiby no nanenjika voalohany ny Vazimba sy nanosika azy handositra.
Araka ny tantara, ireo mpitondra fanjakana maley sy arabo tonga taty anivon'i Madagasikara (taty Imerina sy Ibetsileo) nanomboka ny taonjato faha-15 no nampiasa voalohany ny teny hoe vazimba mba hiantsoany ireo mponina efa tompontany taty anivon'ny riaka tamin'ny fahatongavany teto. Ohatra amin'izany, Andriamanelo dia voalazan'ny lovantsofina fa Maley, nefa Rangita sy Rafohy izay renibeny dia voalazan'ny lovantsofina fa Vazimba. Toy izany koa, Rabiby arabo raha nandao an'Ambohitsitakatra Anjozorobe, dia tonga teo Ankotrokotroka (tato aoriana lasa Ambohidrabiby), ka nandroaka ireo mponina teo izay Vazimba no nahafantarany azy .
Arak'izany, ny hoe vazimba dia tsy teny hiantsoana firazanan'olona na fanahin'ny maty akory (araka ny filazan'ny sasany hoe rehefa maty ny olona sasany dia lasa vazimba) fa anarana iantsoan'ireo mpanjaka arabo sy maley ireo tompontany taty anivon'ny nosy raha tonga taty anivontany ireo Arabo sy Maley ireo tamin'ny taonjato faha-16.
Manaporofo fa tena olona tokoa ireny Vazimba ireny dia i Rapeto sy Rasoalao dia Vazimba. Ary indrindra, ireo Antehiroka dia Vazimba avokoa.
Arak'izany, ny teny hoe vazimba dia saika nampiasaina manerana ny faritra anivon'i Madagasikara ary amin'ny sisintany andrefan'i Madagasikara satria ireo Maley sy Arabo sendra azy ireo dia saika nampiasa io anarana io avokoa hiantsoana ireo mponina efa teo.
1 Ny dikan'ny teny hoe vazimba
2 Ny nipoiran'ny Vazimba
3 Ny toerana ahitana ny Vazimba
4 Ny fombafomban'ny Vazimba
5 Mbola misy ve ny Vazimba ankehitrio?
Ny dikan'ny teny hoe vazimbaHanova
Ny teny hoe vazimba dia mety ho avy amin'ny teny daiaka sy maley hoe wa-yimba izay midika hoe na "vahoakan'ny ala". Ireo vahoaka tany amorontsiraka kosa dia nantsoina hoe vezo na bejo avy amin'ny teny maley hoe bajao. Ny teny hoe wa na va dia midika "andian'olona" na "vahoaka madinika". Niaraka tonga ny Vazimba sy ny Vezo saingy rehefa nahita ny Vazimba fa tsy azo ambolena ny morontsiraka dia niakatra ampovoantany izireo.
Ny nipoiran'ny VazimbaHanova
Ny Vazimba dia ireo Maley sy Polineziana tonga voalohany taty Madagasikara talohan'ny taonjato faha-3 na fah-4 (fa hatramin'ny taonjato faha-14 dia mbola nisy Maley tonga foana teto izay razana nipoiran'Andriamanelo sy ireo mpanjaka sakalava teo Alasora). Tsy nety tamin'ireo Vazimba anefa ny nonina tany anindrana noho ny antony maro. Misy lovantsofina milaza fa narendriky ny ranomasina ny lakana nitondra ireo Maley sy Indoneziana ireo ka nanozona izy ireo fa tsy hanitsaka sy tsy hihinana sira intsony ka hany nataony nandao tanteraka ny moron-dranomasin'i Madagasikara, satria ny ranomasina dia misy sira, ary niditra taty afovoantany. Manaporofo izany, ireo Vazimba dia saika fady sira. Misy kosa anefa milaza fa ireo Maley sy Indoneziana ireo dia mpamboly vary ka taty afovoantany no mety tsara amin'izany fambolena izany ka antony nahatonga azy niakatra taty anivon'ny Madagasikara.
Ny toerana ahitana ny VazimbaHanova
Araka ny voalazan'ny lovantsofina dia saika amin'ny faritra afovoan'ny Nosy no nielipatrana ireo Maley sy Indoneziana ireo. Tamin'ny taonjato faha-16 dia mbola saika ireo Vazimba no nonina taty Ankova sy Ibetsileo. Nifanambady tamin'ireo taranaka Maley vaovao vao tonga taty anivon'ny Nosy tamin'ny taonjato faha-16 ny sasany tamin'ireo Vazimba, koa izany no ilazan'ny lovantsofina fa Andriamanelo dia Maley nefa ny renibeny dia Vazimba. Toy izany koa Rabiby izay voalaza fa Arabo nefa ny vadiny, Ramaintsoakanjo, dia Vazimba.
Fa ity mpanjaka arabo atao hoe Rabiby ity anefa, angamba noho ny maha mpino silamo azy izay tsy tia ny fanaovana ody no tezitra tamin'ireo Vazimba sy nandroaka azy ary nanomboka teo dia nataon'ny tarana-dRabiby lao monina ireo Vazimba taty Imerina ka hany hery nitsoaka niakandrefana. Hoy mantsy ny filazan'ny lovantsofina tamin'izany: "Rabiby no nandroaka an'Andriampirokana teo Ankotrokotroka, ary Andriampirokana nitsoaka tamin'ny zohy atsimo amin'Ankotrokotroka ka namonjy an'Analamanga (atao hoe Antananarivo tamin'Andrianjaka); ary Andrianjaka nandresy sy nandroaka ireo Vazimba teo antsinanan'Ambohidrabiby sy teo Ambohimanaga sy teo Analamanga; ary ny Vazimba tamin'ireny toerana ireny dia lasa niankandrefana nankeo Antehiroka, Babay, Lohavohitra sy any Imamo eny hatrany amin'ny faritra sakalava.
Any andrefana moa no nitsoahan'ireo Vazimba satria mbola malalaka ny tany any no koa tsy te hiantsianana izy satria tany amorontsiraka atsinana hono ny razambeny no vaky sambo. Arak'izany, ny Vazimba taty Imerina dia niakandrefana ka tonga hatrany amin'ny faritr'i Sakalava ny sasany tamin'izy ireo.
Ny fombafomban'ny VazimbaHanova
Olona toa antsika ihany ny Vazimba satria isika Malagasy dia tarana-bazimba avokoa afatsy ny taranak'ireo andevo avy any Afrika tamin'ny andron-dRanavalona I. Misy lava tokoa ny Vazimba satria i Rapeto izay nilalao volana dia voalaza fa Vazimba ka ny dian-tongony dia mbola lehibe tokoa araka ny hita amin'ny vatolampy ao Ambohidrapeto. Misy fohy koa ny Vazimba toa an-dRafohy renin'Andriamanelo izany fa ny anarany aza dia Rafohy satria tratra antitra izy fa tsy sanatria fohy kely akory. Fa maro amin'ireo Vazimba kosa no antoniny tsy lava tsy fohy. Manaporofo izany, ny fikarohana arkeolojika tamin'ny fasam-bazimba maro dia mampiseho fa ireo taolambalon'ny Vazimba rehetra voakaroka dia mampiseho fa olona mirefy manodidina ny 1m 65 ireo Vazimba ary raha lava dia 1m 80. Ny Vazimba koa dia tsy olona mainty fihodirana, satria tamin'ny andron-dRabiby sy Ralambo dia "angaralahy" no fiantso ny olo-mainty fa tsy mba Vazimba akory. Manamporofo indray fa ny Vazimba dia Maley sy Indoneziana izay fotsy fihodirana na mavo na somary mangamanga fa tsy mainty akory.
– Ny Vazimba dia matetika monina amin'ny tampon-kavoana ary tsy mba manao hadivory izy fa vato no alahadahany sy ataony mifanongoa ho fefin-tanàna. Araka izany, tsy ireo mpanjaka arabo na maley akory no nanana ny kolontsaina mitoetra amin'ny tampon-tendrombohitra fa fahendrena nolovainy tamin'ireo Vazimba izany. Manaporofo izany, Ankotrokotroka (Ambohidrabiby) dia fonenan'Andriampirokana tany am-boalohany vao nitoeran-dRabiby ary Analamanga dia toeran'ny Vazimba vao nitoeran'Andrianjaka. Arak'izany, ireo razan'ny andriana merina dia saika nanao izay hipetrahana tamin'ireny toerana efa nisy Vazimba ireny.
– Tena tia mampiasa vato ny Vazimba ka amin'ny tanàna na amin'ny fasany dia saika ahitana ireny vato mifanongoa ireny, izay mbola hita ao an-tampon'Ankaratra sy ao Lohavohitra, ary mbola ny Vazimba koa no nahitana ireny vatolahy na vatomasina ireny mba hanaovana joro sy hataka amin'ny zanahary ka maro ireny vato ireny no atao hoe "vatom-bazimba". Arak'izany, ny fomba fanaon'ny andriana merina mahakasika ny vato dia saika nolovainy tamin'ny fomba sy fahendrena vazimba avokoa.
– Ny Vazimba dia olona mpandala fihavanana sy tsy tia ady, ka izany no naharesen'ireo Maley sy Arabo azy mora foana. Aleony hono mitsoaka toy izay misy rà latsaka satria masina aminy ny ràn'olona latsaka. Nanomboka tamin'ny vanimpotoana nidiran'ireo Maley tonga farany sy ireo Arabo ary Vazaha mantsy hono no nanomboka nikorontana i Madagasikara sy niadiady ireo foko maro tao aminy fa tamin'ireo Vazimba dia to ny fihavanana ary ny Vazimba no nandovan'ny Malagasy ny fihavanana. Tia fifanajana koa ny Vazimba ka izany hono no mahatonga ireny olona manazimbazimba ireny fasam-bazimba ireny hiolan-tenda na harary satria hataon'ny fanahin'ireny Vazimba ireny ho tsy manaja ilay fasany ilay olona.
– Mitsitokotoko ho zana-poko maro ireo Vazimba ary manana ny mpanjakany izy izay ifandovana raha nofidiana izany tany amboalohany. Tsy mba nisy kosa ny mpanompo na hova tamin'ny androny.
– Mivavaka amin'i Zanahary ny Vazimba. I Zanahary mantsy dia andriamanitra saika niraisan'ireo Vazimba niely eran'ny Nosy. Avy amin'ny teny maley tranainy hoe zan'ahary ny hoe zanahary. Ary anaran'andriamanitr'ireo Maley tranainy io Zan Ahary io izay midika hoe "andriamanitra masoandro". Ny hoe ahary mantsy dia fototeny amin'ny hoe johary ary amin'ny Ntaolo, ny tara-masoandro no antsoiny hoe "andriamanitra tonga an-trano".
– Ny Vazimba no nandovan'ny Malagasy ny finoana ny hasina ary ny Vazimba dia mihevitra ny tenany ho "taranak'ireo manan-kasina" ka amin'ny toerana misy azy dia saika namboleny hasina. Ireo Arabo sy Maley (vao tonga tamin'ny taonjato faha-16), izay nivady tamin'ireo Vazimba vavy dia nandova avy hatrany ny finoana ny hasina tamin'ireo Vazimba ka ny taranany dia nataony ho tompon-kasina ary ny vohitra nisy azy dia namboleny hasina hatrany mba hanehoany izany hasina ao aminy sy ny taniny izany. Porofon'izany, ireo hazon'andriana toy ny aviavy sy amontana dia tsy misaraka amin'ny hasina ary matetika ny hasina no tsy maintsy mijoro amin'ny vohitr'andriana fa ny aviavy sy amontana azo leferina ihany ny tsy fisiany. Arak'izany, ny hasina dia tsy hazom-bazimba fotsiny fa indrindra hazom-panandratana amin'ny zanahary ary hazon'andriana.
– Tsy ireo Arabo na ireo Maley vao tonga tamin'ny taonjato faha-11 akory no nitondra ny fototry ny teny malagasy fa ireo Vazimba na Indoneziana sy Maleziana tonga teto Madagasikara talohan'ny taonjato faha-4. Ireo Vazimba no nielipatrana erak'i Madagasikara ka nifanambady tamin'ireo Afrikana vao tonga ka nanome ireo teny atandroy, bara, sakalava, antakarana. Ireo Vazimba koa no nivady tamin'ireo Arabo sy Maley vao tonga taty anivon'ny riaka nanomboka ny taonjato faha-11 ka nahazoana ny teny betsileo, merina, sihanaka, bezanozano, bara, sns...
– Mandevina ny Vazimba ary fasana tokana isan'olona ny azy. Matetika koa dia tsy mba tia alevina anaty tany izy fa ambony vato satria atahorany hohanin'ny kankana ny vatany raha tsy izany dia alevina anaty hazo izy ka atao toy ny lakana mifanarona ny hazo. Misy milevina amin'ny tany ihany anefa ny Vazimba. Matetika ireny fasam-bazimba ireny dia eny an-tampon-kavoana no anaovany azy. Mino ny razana ny Vazimba, ary ny finoan'ny Malagasy ny razana dia nolovainy tamin'ny Vazimba.
– Na dia mpilalao ody aza ny Vazimba, ireny ody ireny dia tsy mba nentiny nanaovana ratsy na namosaviana fa nampandrosoana sy nanasoa hatrany ny fiarahamonina.
– Vary sy saonjo no foto-tsakafon'ireo Vazimba ary tsy mba mihinana omby izy fa ny ronono no sotroiny. Akoho dia kosa no fihinany. Ankoatr'izay dia mioty sy mihaza no ataony. Efa nahandro tamin'ny afo koa izy ary efa nanao ny fanandroana koa. Tsy mba nitafy lamba izy ary tsy mbola nahay nanenona landy fa ireo andriambavy arabo no nanenona nitondra izany taty anivontany. Ravin-kazo norariana kosa no fitafiny ary ravin-kazo arary ny tranony ka izany no tsy nahitana tranom-bazimba mandrak'ankehitrio.
Mbola misy ve ny Vazimba ankehitrio?Hanova
Nisy tamin'ireo Vazimba no tonga vadin'ireo Arabo sy Maley vao tonga ka lasa loharano nipoiran'ireo andriana merina sy betsileo. Taty Imerina, ny mpanjaka Ralambo teo Ambohidrabiby ohatra dia tarana-bazimba avy amin'ny rainy izay tera-dRafohy vazimba sy avy amin'ny reniny izay zana-dRamaintsoakanjo vazimba. Arak'izany, ny andriana merina dia saika tarana-bazimba.
Ireo Vazimba izay tsy nandositra tamin'ny ady nataon'ny Maley tonga farany sy ireo Arabo nefa tsy novadian'ireo Arabo sy Maley vao tonga dia tonga "Hova" na "Vohitra" fa tsy mba natao ho mpanompo akory. Arak'izany, ireo taranaka Hova na "Folovohitra" taty Imerina sy Ibetsileo dia saika tarana-bazimba.
Misy kosa anefa ireo Vazimba izay tonga olona akaikin'ireo taranak'Arabo izay nanorina fanjakana ka nomen'ireo taranak'Arabo ireo anjara asa izy ary nosokajiany ho "havan'andriana" toy ireo zanak'Antehiroka.
Ary ireo Vazimba nandositra niakandrefana dia mbola maro ireo taranany ankehitrio ka nifanambady tamin'ny foko maro amin'ny faritra andrefan'ny Madagasikara, toy ny Sakalava, Antakarana, Tsimihety, Sihanaka, sns...
Saika nihomehezan'ireo Arabo sy Maley vao tonga moa ny Vazimba noho izy ireo katahotra sy mpinompino foana hono ka raha misy olona ambanimbany hono na voatohintohina ny zony na ny fadiny dia ataon'ny olona hoe "voazimbazimba" ny fiteny izany olona izany.
Ankehitrio dia mbola raiki-tampisaka amin'ny Malagasy maro ny finoana ny Vazimba, ka mivavaka aminy. Mbola maro koa anefa ny Malagasy no menatra ny atao hoe "tarana-bazimba" anefa anie ka raha fantany fa ny Vazimba, na dia mpilalao ody aza dia tsy mba nanao izany ho famosaviana fa nanasoavany hatrany ny tontolony mba ho masina hatrany izy sy ny taranany ary i Madagasikara tanidrazany.
Koa isaky ny maheno ianao hoe "Masina ny tanindrazana" na koa "fihavanana, soatoavina malagasy" dia tsiahivo fa avy amin'ny Vazimba no nolovaintsika izany fomba fihevitra izany.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Vazimba&oldid=971165"
Dernière modification le 4 Jiona 2019, à 12:39